नेपालमा गैँडाको संख्या ७५२ पुग्याे, पाँच वर्षमा १०७ गैँडा बढे | NepaleKhabar.com
April 10, 2021 | 9:22 pm
लक्ष्मीप्रसाद उपाध्याय / काठमाडौँ, चैत २८ गते । विश्वमै दुर्लभ मानिएको एकसिँगै गैँडाको संख्या नेपालमा ७५२ पुगेको छ । झण्डैै पाँच वर्ष पछि भएको एकसिँगे गैँडाको राष्ट्रिय गणनामा संख्या गैँडाको संख्या अघिल्लो गणना भन्दा १०७ बढेको छ । यस अघि सन् २०१५ मा गरिएको गणनामा गैँडाको कुल ६४५ संख्या रहेको थियो ।
शनिवार चितवनमा सार्वजनिक गरिएको यो संख्या चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा ६९४, पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जमा तीन वटा गँैडा रेकर्ड गरिएका छन् । त्यसैगरी बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा ३८ वटा र शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जमा १७ वटा गैँडाको संख्या रेकर्ड गरिएको छ । पछिल्लो पाँच वर्षमा पर्सा बाहेक अरु राष्ट्रिय निकुञ्जमा गैँडाको संख्या निकै सन्तोषजनक रुपमा वृद्धि भएको छ भने पर्सामा भने सन् २०१५ को संख्या जस्तै तीन वटा मात्र गैँडा भेटिएका छन् । वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. विश्वनाथ ओलीले यो संख्या सार्वजनिक गर्नुभएको हो ।
यसअघि सन् २०१५ को गणनामा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा ६०५, बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा २९, शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जमा ८ वटा र पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जमा तीन वटा गैँडा रेकर्ड गरिएका थिए ।
गणना गर्दा ज्यान गयो
गैँडा गणना गर्ने क्रममा बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको गैँडा मचान क्षेत्रमा बाघको आक्रमणमा परी गैँडा गणनामा सहभागी हात्ती माउते पुलिसराम चौधरीको मृत्यु भएको छ । आक्रमण गर्ने समस्याग्रस्त बाघलाई तत्काल डार्ट गरी ललितपुरको सदरचिडियाखानमा राखिएको छ ।
त्यसैगरी चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको अमलटारी क्षेत्रमा ध्रुबे हात्तीको आक्रमणबाट राष्ट्रिय प्रकृति कोषका संरक्षण अधिकृत बिनोद श्रेष्ठ लगायतका चार जना घाइते भएका थिए । ढाड र टाउकोमा गम्भीर चोट लागेपछि श्रेष्ठको काठमाडौँको हयाम्स अस्पतालमा अपरेशन पछि हाल उपचार भइरहेको छ ।
गणनाकै वर्ष चोरी शिकार बढ्यो
गत वर्ष चैत ११ गतेबाट गैँडा गणनाको सम्पूर्ण तयारी भएपनि चैत १० गतेबाट कोरोनाका कारण लकडाउन भएकाले गैँडा गणना हुन सकेन । कोरोनाका कारण लकडाउन भइरहेका बेला यो वर्ष चितवनमा मात्र चार वटा गैँडा चोरी शिकारीबाट मारिएका छन् । यो वर्ष प्राकृतिक रुपमा २६ वटा गैँडाको मृत्यु भएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा चितवनमा मात्र चोरी शिकार र प्राकृतिक कारणले ३० वटा गैँडा नासिएका छन् ।
शून्य शिकार वर्ष मनाउन असफलता
२०६७ साल पुसबाट राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले गैँडाको शून्य चोरी शिकार वर्ष मनाउने घोषणा गर्यो । निकुञ्ज प्रशासन, स्थानीय बासिन्दा तथा नेपाली सेना सक्रिय सहभागिताले २०६८ साल पुस २३ गते पहिलो शुन्य चोरी शिकार वर्ष मनाउन विभाग सफल भयो । यो क्रम करिब एक हजार दिन पार गर्दा गर्दा आर्थिक वर्ष २०७१÷२०७२ मा एउटा गैँडा चोरी शिकारीका कारणले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा मारियो । त्यसको पछिल्लो वर्ष फेरी एउटा गैँडा चितवनमै शिकारीले निसाना बनायो र खास काटेर लियो ।
प्राकृतिक मृत्यु दर बढ्यो
यी दुई घटना पछि निकै सावधानीपूर्वक काम गरेको विभागले बीचका केही वर्ष गैँडालाई चोरी शिकारीबाट बचाएपनि प्राकृतिक कारणले गैँडाको मृत्युदर नियन्त्रण गर्न भने सकेन । चालु आर्थिक वर्षमा २६ वटा गैँडा प्राकृतिक कारणले मरिसकेका छन् भने यही वर्षमै चार वटा गैँडा चोरी शिकारीले मारेर खाग लगेका छन् ।
विगत २२ वर्षको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने चोरी शिकारीबाट भन्दा प्राकृतिक मृत्युले नेपालका गैँडाको संख्यामा निकै क्षति पुगिरहेको छ । २२ वर्षको अवधिमा कुल ४९८ वटा गैँडाको मृत्यु भएको छ । ती मध्य ३३३ वटा गैँडा प्राकृतिक कारणले मरेका छन् भने चोरी शिकारीबाट १६५ वटा गैँडाको मृत्यु भएको छ ।
सरकारले एकसिँगे गैँडाको शुन्य चोरी शिकार वर्ष मनाउन थालेपछि चोरी शिकारको दर भने निकै कम भएको छ । सन् २०११ मा पहिलो पटक सुरु गरिएको शुन्य चोरी शिकार वर्षदेखि हालसम्म आउँदा जम्मा ६ वटा गैँडा मात्र चोरी शिकारीका कारणले मरेका छन् भने बाँकी सबैको प्राकृतिक कारणले मृत्यु भएको हो ।
बासस्थानमा चुनौती चुलिँदै
एकसिँगे गैँडाका लागि चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज सबैभन्दा ठूलो उर्वरभूमि हो । कुल गैँडाको झण्डै ९० प्रतिशत गैँडा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र आसपासका मध्यवर्ती सामुदायिक वनमा मात्र पाइने गरेका छन् । यद्धपी पछिल्ला वर्षमा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा मिचाहा प्रजातिका कारण घाँसे मैदान बिस्तारै नासिँदै गएका छन् भने नारायणी नदीमा आउने बाढी पनि गैँडालाई थप चुनौती बन्न थालेको छ ।
गैँडामा विद्यावारिधि गर्नुभएका डा. नरेश सुवेदीका अनुसार चिवतनका घाँसे मैदानहरुमा हरियो घाँस देखिएपनि मिचाहा प्रजातिको जालोले ढाक्दा गैँडालाई बिचरण गर्न निकै कठिनाई हुने गरेको छ भने गैँडाको लागि चाहिने पोसिलो आहार बिस्तारै नासिँदै गएको छ ।
अर्काेतिर वर्षेनी नारायणी नदीमा आउने बाढीले गैँडालाई बगाएर भारत लैजाने गरेको छ । गत वर्षको बाढीले बगाएर भारत पुर्याएका नौ वटा गैँडाको भारतबाट उद्धार गरिएको निकुञ्ज विभागका उपसचिव बेदकुमार ढकालले बताउनुभयो । तत्कालिन अवस्थामा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत समेत रहनु भएका ढकालले भन्नुभयो, हामीले भारतबाट नौ वटा गैँडाको उद्धार गरेर फिर्ता ल्यायौँ । एउटा गैँडा त बगाएर लगेको नेपालकै सीमाना त्रिवेणी क्षेत्रबाट उद्धार गरियो ।
बयस्क गैँडा बाढीले बगाएपनि छेउछाउ लाग्न सक्ने हुँदा भारतमा फेला पार्न सकिन्छ तर बच्चालाई भने बगाएर लैजाने हुँदा नेपालमा गैँडाको संख्या घट्ने गरेको विभागको अनुमान छ ।